Jobs (NewChallenges) in Myanmar
Post tagged as Biography
အခက်အခဲတွေကြား ယုံကြည်မှုနဲ့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူ
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကို ကြုံရတဲ့သူတိုင်းဟာ ပြုံးပျော်ရယ်မောတတ်ကြပါတယ်။ ရယ်မောခြင်းဟာ အသက် ရှည်စေတယ်လို့လည်း ကြားဖူးပါတယ်။ ကိုယ်ပျော်ရွှင်နေသလို သူများကိုပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ရင် သူများ အသက်ရှည်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသလိုဖြစ်တာကြောင့် ရယ်မောစရာပြော တတ်တဲ့သူဆိုရင် လူအများက မှတ်မိလွယ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေကိုရယ်မောစေဖို့ အခက်အခဲတွေကြားကကြိုးစားခဲ့ရတဲ့သူ တစ်ယောက် အကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ...
ဆင်းရဲသူတစ်ယောက်မှသည် ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင်ခဲ့သူ တစ်ဦး (သို့) အန်ဒရူး ကာနီဂျီ
လူတိုင်းဟာ ပြည့်စုံ ချမ်းသာကြွယ်ဝ ချင်ကြပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့ သူ တွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်လည်း သူတို့ လိုဆိုရင် ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး တွေးမိ တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကံတရားရဲ့ စောင့်ရှောက်မှု မတူညီတာကြောင့် သူဖြစ်သလိုမျိုး ကိုယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ချမ်းသာကြွယ်ဝလို့ ပြည့်စုံတဲ့သူတွေထက်စာရင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိလာတဲ့သူတွေကသာ အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ အနှစ်သာရကို တကယ်ရရှိခံစားတတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး သူဌေးကြီး ဘီလ်ဂိတ် က ဆင်းရဲစွာ မွေးဖွားလာတာဟာ သင် အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး ၊ သေဆုံးသွားတဲ့အချိန်ထိ ဆင်းရဲ နေသေးတယ် ဆိုရင်တော့ သင့် အပြစ်ဖြစ်သွားပါပြီ လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ...
Management Leadership Biography Workplace News CSR Knowledge Career Greeting Entrepreneur Way of living Education Recruitment Communication NewChallenges Registration Quotes Social
NewChallenges.com.mm is one of the top job website that connects jobseekers searching forajob and employers recruiting top talented employee in Myanmar. As well as Employer could able to advertise their company’s brand and goods(product or service) on NewChallenges.com.mm .Let’s start today. We are here to support for our people.
• Update C.V
• Favorite Jobs
• Search C.V
No.374/B,6th floor,Thanthumar Road,Kyee Bwar Ye Quarter,Thingangyun Township,Yangon,Myanmar.
ALL RIGHTS RESERVED © 2019 NewChallenges